Lashukumisa Ensimbi Round Pipe
Lashukumisa Steel Square Pipe
Lashukumisa Steel kukanxande Pipe
Lashukumisa Steel Okusaqanda Pipe
Steel wayinika umdlandla Pipe ezimise
Lashukumisa Steel Pipe nokufaka
Lashukumisa Steel Tee
Lashukumisa Steel Elbow
Lashukumisa Steel flange
Henan Jialie Imboni Co., Ltd. itholakala China emaphakathi commercial ihabhu-Zhengzhou. Kuyinto enkulu yangasese Al Industrial Co.Ltd China, futhi Aluminium ishidi lekhoyili ivolumu ukuthekelisa lifaka wokuqala kule okuqhubekayo iminyaka eyisishiyagalolunye. Jialie kuyinto inkampani okuhlangene nebhizinisi kusuka design, ukukhiqizwa, kobuchwepheshe nokumaketha amasevisi. Inkampani ukuzijayeza ngokugcwele futhi ukukhuthaza imimoya yayo "Ukuze Live On Our Own ukuba bahole futhi zichume", manje, ukuthi ekhula, ngokushesha futhi luqine. Zhengzhou Wanzhi Izinto Co., Ltd. kuyinto inkampani yakwa-ephethwe of Jialie Group, tube legatsha lashukumisa ikakhulukazi ohileleke womshini grade aphezulu kawoyela & wegesi nezintsha oluhlaza ezisetshenziswa umphakathi pipeline.So kude, it has 4 eliyifa futhi wabelane ipayipi izinkampani, okuyilona elisebenzayo futhi ibhekwa njengenye yezinto kwekulu esibanzi ipayipi yokukhiqiza elisekela.
Umhlahlandlela - Imikhiqizo ezifakiwe- Ibalazwe - Hambayo Site